बुर्तिवाङका २२ वर्षिय युवकको शिरच्छेदन गरी हत्या ! – ebaglung.com
बुर्तिवाङका २२ वर्षिय युवकको शिरच्छेदन गरी हत्या !
२०७५ भाद्र १९, मंगलवार १६:१७	Top News, थप समाचार 1 comment
बिमल खड्का, बुर्तिवाङ २०७५ भदौ १९ । बुर्तिवाङ घर भै हाल काठमाडौँ सानो भयाङ् हजुर बुवा आमा र भाई सँग बस्दै आएका २२ वर्षिय संगिन जीसीको शव काठमाडौको स्वयंभू जंगलमा टाउको चुँडिएको अवस्थामा भेटिएको महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ । मृतक जीसी रक्षा बन्धनको दिन १२ गते दिउँसो २ बजे घुम्न भनि बाहिर निस्केपछि घरमा फर्किएका थिएनन् । अर्को दिन भदौ १३ गते पनि परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि हजुरबुबाले महानगरीय प्रहरी बृत स्वयम्भूलाई खोजिदिन निवेदन दिएका थिए ।
भदौ १७ गते आईतबार दिउँसो ४ बजे साना केटाकेटीले स्वयंभूको जंगलमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । महानगरिय प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी नायव उपरिक्षक होविन्द्र बोगटीले परिवारले दिएको हुलियाको आधारमा जीसीको कपडा र चप्पलबाट शव पहिचान भएको बताए । प्रहरीका अनुसार स्वयम्भूकै जंगलको झाडी भित्र जिसीको शरीर र टाउको चुडिए र शरीर सडेको अवस्थामा भेटिएकोे छ ।
मृतकका बाबु निम बहादुर जीसीका अनुसार आफ्नो छोराको हत्या कुनै नियोजित तरिकाले भएकाल हत्यारालाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइटी सम्बन्धीको साताँै सेमिस्टर न्यू सुमिट कलेज शान्तिनगरमा अध्ययन गर्दै आएका उनी यस पछिको अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रकृयामा रहेका थिए । तर उनको पठाई सकिनै नपाउँदै त्यो सपना भने पुरा हुन सकेन । जीसीको शव अहिले त्रिभूवन शिक्षण अस्पतालमा महाराजगंजमा राखिएको छ । हत्यारा पत्ता नलागेसम्म परिवारले शव नबुझने बताएका छन् ।
गौरा पर्वमा नाँच्दा नाँच्दै ढलेर इहलीला समाप्त भयो देवी मरासिनीको !
तिन बर्ष देखि नातिनी वलात्कार गर्दै आएका म्याग्दीका ८० बर्षिय बृद्ध प्रहरी हिरासतमा
September 4, 2018 at 7:12 pm -
हत्यारा लाई कार्बाही हुनै पर्छ..